म मात्र केहि हैन भन्दै आए नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धी निशान ,आखिर के भनेका हुन् उनले ? (भिडियो हेर्नुहोला ) – Complete Nepali News Portal
म मात्र केहि हैन भन्दै आए नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धी निशान ,आखिर के भनेका हुन् उनले ? (भिडियो हेर्नुहोला )
August 27, 2017	454 Views
नेपालको पहिलो टेलभिजन कार्यक्रम नेपाल आइडलमा उत्कृष्ठ पाँच जनाको सुचि तयार भएको छ । शुक्रबारबाट सुजता पाण्डे बाहिरिएपछि नेपाल आइडलमा उत्कृष्ठ चारको सुचि तयार भएको हो । नेपाल आइडलमा निकै चर्चा कमाउन सफल सुजता पाण्डे बाहिरिनुभएको छ भने उपाधीको दाबेदा मानिएका बुद्ध लामा पहिलो पल्ट डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ।
निशान भट्टराईले उत्कृष्ठ चारमा आए लगतै दर्शकले मलाई उत्कृष्ठ चारमा लेइदिनु भयो ,माया गर्दिनु भयो भनि आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत गरि सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको छ । उनले दर्शक र सुभचिन्तकलाइ मात्र नभएर गुरुबर्ग , वाैद्धिक व्यक्तित्वहरु, जात, धर्म र सिमानाका कुराहरु पनि उठाउनु भएको छ । आखिर निशानले के कुरा गरे त ? तलको भिडियोमा सबै जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।